5 Waxyaabood Oo Haboon Inaad Ilmahaaga Ku Korisid - Daryeel Magazine
5 Waxyaabood Oo Haboon Inaad Ilmahaaga Ku Korisid
Ilmahaagu wuxu zaaid kugu baahanyahey marku yaryahay, waa marka bari laheed asaasiga nolosha.
Ilmahaga oo aad la sheekeysata waxey ku sahlaysa iney saaxiib kula noqdaan oo aanay waxba ka qarin. Hadaad markasta aad is aragtan sheekadiinu tahay iskuul aad, seexo, iyo amar ku jira hadalkaga oo dhan. Ilmuhu wuxu dareemaya kalsooni daro oo inaadan aaminsanayn ayuu dareemi, iska ilaali ilmahaaga oo aan kula sheekeysan waxey tusinaysa inuu waxyaabo badan ka qarinaayo. Si saaxibtinimo ula sheekeyso had iyo goor. Ilmahaaga saaxiib wanaagsan ayaad u noqon karta hadaa isku furfurtid.
Bar qiimaha aqoonta leedahay:
Aqoontu waa laazim oo had iyo goor ku waani iney wax bartan, kana dhaadhici faa’idada aqoontu leedahey. Hadyad u gad markay iskuulka natiijo fiican keenan, waxey ku dhiiri galinaysa inay si ka wanaagsan sameyan marka xigta. Ilmahaaga ka dhig kuwa diinta barta had iyo goorna ku xirnaada, bar aqrinta Quraanka. Ogow waa waalidka kan ah geesiga ilmaha oo inay ku daydaan ayey isku dayan marka ugu horaysa, adiga ayaa u suurta galin kara riyadas intay yaryihiin.
Maahmaah ayaa waxey odhaneysa ‘Waxa garaneysa meeshaad joogtid, markaa garanaysid meeshaad ka timi’. Hadaba ilmahaagu yeysan noqon kuwa lunsan markii la weydiiyo wadankay kasoo jeedaan iyo taariikhdiisa. Ku ababi inay noqdaan kuwa ku faana wadankooda oo wadaninimo ka muuqato had iyo goor. Uga sheekee taariikhda dalkooda markasta oo aad firaaqo hesho.
Bar inay xushmeeyaan qof kasta haka yaraado ama aka weeynaado. Ka dhig kuwa idinsada isla markaasna mahad celiya. Kuwo uga kaca fadhiga dadka waweyn, garaaca albaabka intaysan galin guri. Ka dhaadhici inay dadka ula dhaqmaan siday jecelyihin in loola dhaqmo. Haku qaylinin ee xasuusi haday ilwaan inay mahad celiyaan ama wax idinsanwayaan.
Uga dig had iyo goor waxyaabaha xunxun oo ka dhaadhici waxyeelada ay leeyihin. Ha uga digin oo kaliya iney ka fogaadan waxyaabaha xun, ee u sheeg sidoo kale dhibka kasoo gaareysa. Uga sheekey waxyaabaha cowrada ah iyo nolasha gabi ahaan.
10 Qodob Oo Kaa Caawinaya Inaad Caruurtaada Ka Dhisto Dhanka Maskaxda Si Aad U Dhisto Maskaxda Ilmahaaga, Tillaabooyinkaan Raac Weligaa Ilmahaaga Ha U Garaacin Khalad U Sameeyay!!! SIDEE CARUURTA LOO SIXI KARAA? Qaladaad Si Sahlan U Dhaca Oo Sun Ka Dhigi Kara Dawada Aad Ilmahaaga Caafimaad Ahaan U Siinayso